कहाँ र कहिले हुदै छ बार्सिलोना विरुद्ध भ्यालेन्सियाको कोपा डेल रे फाइनल !! - Experience Best News from Nepal
कहाँ र कहिले हुदै छ बार्सिलोना विरुद्ध भ्यालेन्सियाको कोपा डेल रे फाइनल !!
स्पेन नकआउट फुटबल खेल कोपा डेल रे बार्सिलोना विरुद्ध भ्यालेन्सिया छिट्टै हुदै छ । रियल मड्रिडलाई ३-० ले हराउदै बार्सिलोना र रियल बेटिसलाई १-० ले हराउदै भ्यालेन्सिया कोपा डेल रे को फाइनल प्रवेश गरेका हुन । फाइनल खेल मे २६ मा बेनिटो भिल्लामारिन स्टेडियममा हुदै छ । उक्त मैदान सेभिल्लाको घरेलु मैदान हो । नेपाली समय अनुसार भने खेल २६ मे राति १२:४५ बजे हुनेछ ।
६० हजार समर्थक अटाउन सक्ने उक्त मैदानमा ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना र भ्यालेन्सिया भिड्ने छन् । च्याम्पियन लिगबाट बाहिरिदाको बदला बार्सिलोनाले उक्त खेलबाट लिन सक्ला ? उक्त ट्रफी बार्सिलोनाका निम्ति सिजनको अर्को ठुलो ट्रफी हुनेछ ।
उक्त खेल प्रसारणका निम्ति विभिन्न च्यानलहरुले प्रसारण इजाजत लिइसकेको बताइएको छ । ला लिगा च्याम्पियन र भ्यालेन्सियाको उक्त खेलमा लिओनल मेस्सीको सामेलता हुने हुदा समेत खेल रोमान्चक हुने आयोजकको भनाइ छ ।
गोल रक्षक टर स्तेगेन बार्सिलोनाका निम्ति खेल खेल्ने नखेल्ने दुबिधामा रहेको समाचार बाहिरिएको छ ।
बार्सिलोना अधक्ष्य बार्टोमेउ : नेय्मार भन्दा डेम्बेले अब्बल फुटबलर !! उनको नजरमा यी ४ खेलाडी कस्ता
कौटिन्हो भन्छन, भिडालमा बार्सिलोनाको डी.एन.ए छ !! उनि बार्सिलोनाका एक लडाकु हुन्
मो. सलाह एनफिल्ड छाड्दै बार्सिलोना जानुपर्छ: समुल इटो
बार्सिलोनाले रियल भालाडोलिडलाई एक शून्यले हरायो !
रियल बेटिस विरुद्ध बार्सिलोनाको खेलमा घटेका ३ ठुला घटना र पदर्शन !!